Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Inter, Bayern Munich & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaarayo shanta horyaallada ee ugu waa weyn Yurub – Gool FM
(Yurub) 24 Okt 2020. Kulamo ka tirsan horyaallada waa weyn qaaradda Yurub ayaa maanta iyo caawa la ciyaari doonaa, waxaana ka mid ah Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 iyo Bundesliga dalka Jarmalka.
Kooxaha Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Inter, Bayern Munich ayaa ka mid ah kooxaha waa weyn ee maanta illaa caawa ciyaari doona horyaalladooda.
Horyaalka Premier League kulanka ugu weyn ee la sugayo waa midka garoonka Old Trafford ku dhex mari doona kooxaha Man United iyo Chelsea, sidoo kale horyaalka kooxaha waa weyn ee ciyaarta waxaa ka mid ah Manchester City iyo Liverpool oo la kala dheeli doona West Ham United iyo Sheffield United.
Dhinaca kale horyaalka La Liga isaga waxaa maanta la sugayaa kulanka El Clasico ee garoonka Camp Nou ku dhex mari doona kooxaha Barcelona iyo Real Madrid, halka Atletico Madrid ay soo dhoweynayso Real Betis.
Horyaalka Serie A kulammada ugu madaxa fiiqan waxaa ka mid ah midka ay Inter Milan ay u safreyso Genoa iyo kan kooxaha Lazio ay soo dhoweynayso Bologna.
Geesta kale horyaalka Bundesliga Jarmalka ayaa la ciyaarayaa isagana, Iyadoo Bayern Munich ay soo dhoweynayso Eintracht Frankfurt iyo midka ay Borussia Dortmund qaabilayso Schalke 04, halka horyaalka Ligue 1 ee Faransiiska isagana kulamo ka tirsan la ciyaari doono, waxaana ka mid ah midka ay caawa kooxaha Paris Saint-Germain marti-gelinayso Dijon.
02:30 Duhurnimo West Ham United vs Manchester City
05:00 Galabnimo Fulham vs Crystal Palace
07:30 Habeennimo Manchester United vs Chelsea
10:00 Habeennimo Liverpool vs Sheffield United
05:00 Galabnimo Barcelona vs Real Madrid
07:30 Habeennimo Osasuna vs Athletic Bilbao
07:30 Habeennimo Sevilla vs Eibar
10:00 Habeennimo Atletico Madrid vs Real Betis
04:30 Galabnimo Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
04:30 Galabnimo Mainz 05 vs Borussia Moenchengladbach
04:30 Galabnimo RasenBallsport Leipzig vs Hertha Berlin
04:30 Galabnimo Union Berlin vs Freiburg
07:30 Habeennimo Borussia Dortmund vs Schalke 04
04:00 Galabnimo Atalanta vs Sampdoria
07:00 Fiidnimo Genoa vs Inter Milan
09:45 Habeennimo Lazio vs Bologna
06:00 Maqribnimo Lorient vs Marseille
10:00 Habeennimo Paris Saint-Germain vs Dijon